म्यानपावर सञ्चालकद्वारा यसरी हुन्छ ठगी, सरकार मुकदर्शक (भिडियो सहित) – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
काठमाडौं । देशमा रोजगारिको सिर्जना नभएपछी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको दिनहु लर्को लाग्ने गरेको छ । कोरोनाको महामारी सुरु भएपछी ठप्प भएको वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि लिईने अन्तर्वाता फेरी सुरु हुन थाल्यो त्यो पनि अवैध रुपमा । ठगीका घटनाको दिनहु फेस गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तत अवैध रुपमा अन्तर्वाता लिईदै गरेको सुचना पायो र छापा हान्न नेपाल प्रहरी र संचारमाध्यम सहित टोली अन्तर्वाता भईरहेको स्थानमा पुग्दा जे देखियो । पूर्व श्रम स्वीकृति नलिई कतार पठाउने भन्दै कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावर कम्पनीमा पनि मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मार्यो । लाजिम्पाटस्थित होप इन्टरनेसनलमा विभागले छापा मारेको हो । होप ईन्टरनेशनलमा छापा मार्दा जे देखियो ।
छापा मार्ने क्रममा नेपालस्थित विदेशी दूतावासको गाडी पनि म्यानपावर कम्पनी परिसरमै भेटिएको छ । विभागको टोली पुगेको थाहा पाएपछि अन्तरवार्ता बन्द गरेर म्यानपावर सञ्चालक, कर्मचारी र दूतावासका अधिकारी कार्यालयभित्र लुकेका थिए । विभागको टोलीसँग म्यानपावरका एजेन्टहरुले वादविवाद समेत गरेका थिए । यसरी वादबिवाद हुदाँ मेनपावर कम्पनीका लागि दोभाषेको काम गर्नेले उल्टै मिडिया यसरी आईदिदाँ नेपाल र कतारबिचको कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रने भन्दै मेनपावर कम्पनी र कतारीहरुकै बचाउ गरेका थिए । यता म्यानपावर कम्पनीको कार्यालयमै बिदेश दूतावासको सवारी साधन भेटीईनुलाई अन्य बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले चरम लापरवाही र कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघनका रुपमा लिएका छन् । हुनत बैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार डीडी ह्युमन रिसोर्स र एस ओएस म्यानपावर कम्पनीमा पनि छापा मारेर कागजपत्र समेत जफत गरेको थियो । धापासीमा रहेको एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालि र गौरीघाटमा रहेको डीडी ह्युमन रिसोर्स प्रालीमा कतार पुलिसको लागि डिमाण्डको पूर्व स्वीकृति विना नै अन्तर्वार्ता लिन लागिरहेको अवस्थामा छापा हानेको हो । दुई म्यानपावर कम्पनीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति विना नै अन्तर्वार्ता लिइरहेको पूर्व सूचनाका आधारमा विभागको एक टोली आकस्मिक अनुगमनमा पुगेको थियो ।
विभागको अनुगमन टोली गुह्येश्वरीस्थित डीडी ह्युमन रिसोर्समा पुग्दा म्यानपावर व्यवसायी प्रेम कटुवाल सहित केहि विदेशी प्रतिनिधि खादा लगाएर बाहिरिएका थिए । डीडी ह्युमनले मिनिस्टरी अफ इन्टिरियर ह्युमन रिसोर्स डिर्पाटमेण्ट कतारमा सुरक्षा गार्डको रूपमा पठाउने भन्दै प्रिअन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो । म्यानपावरले एउटै ठूलो कोठामा सयौँको संख्यामा युवालाई राखेर तालिमसमेत दिइरहेको थियो । विभाग टोलीले डिमाण्डको पूर्वस्वीकृति नभएको भन्दै तत्काल सम्पूर्ण कार्य रोक्न लगाएर आवश्यक कागजात माग गरेको थियो । तर, म्यानपावरले विभाग टोलीलाई असहयोग गर्दै कर्मचारीले तालिम लिएको हो भन्दै काम गरिरहेका थिए । अन्तर्वार्तामा सहभागी युवाले हातहातमा लिएको फर्ममा कतार पुलिसको लागि डीडी म्यानपावरको नाम भएको फर्म देखाएका थिए । विभाग टोलीले डिमाण्डको पूर्वस्वीकृतिका साथै अन्तर्वार्ता लिन विभागबाट लिइएको अनुमतिको कागजात माग गर्दा ती कुनै पनि कागजात भेटिएको थिएन । सोपश्चात विभाग टोलीले आवश्यक कागजात सहित म्यानपावर संचालकलाई विभाग उपस्थित हुन पत्र काटेको छ । विभाग अनुगमन टोली एसओएस म्यानपावर सर्भिसमा पुग्दा सयौँको संख्यामा युवा हातरहातमा आवेदन फर्म लिएर गेटअगाडि लाइनबद्ध भएर बसेका थिए । म्यानपावर कम्पनीको दुवै गेट बाहिर सयौँको संख्यामा भीड भए पनि एसओएस म्यानपावरभित्र अन्तर्वार्ता लिइरहेको विभाग टोलीले भेटेन । अन्तर्वार्ताका लागि सहभागी केही युवाले म्यानपावर कम्पनीले नै बोलाएर आएको बताएका थिए । ती म्यानपावरमा ४ सयभन्दा बढी युवाहरु अन्तरवार्तामा लागि आएको भेटिएको थियो ।
नियमअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकको मागपत्र विदेशस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । र, तय भएको अन्तरवार्ताको मिति विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ । अन्तरवर्ताबाट छनोट भएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागबाट जारी हुन्छ । तर, अहिले काठमाडौंमा विभिन्न म्यानपावरले ठगी गर्ने गरी पूर्वस्वीकृति नभएको श्रमिकको मागपत्रमा आधारित भएर अन्तरवार्ता चलाइरहेको पुष्टि भएको छ । कतारको नेपालस्थित कतारी दूतावासका कर्मचारी नै यसमा संलग्न रहेको देखिएको विभागले जानकारी दिएको छ । तीन महिनाअघि देखिनै कतारमा श्रमिक पठाउने काममा सीमित म्यानपावर मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको चर्चा चलिहरेको छ । संसदीय समितिले पनि सरकारलाई यसबारे छानविन गर्न भनेको छ । यही बेला भटाभटी कतारको रोजगारीका लागि भन्दै अवैध रुपमा अन्तरवार्ता लिने काम चलिहरेको पुष्टि भएको छ । कतारी पुलिसका लागि भन्दै सुरुमा महिनामा १ लाख र ३ महिनापछि महिनाको २ लाख कमाइ हुने भन्दै अहिले विभिन्न म्यानपावरमा यस्ता अन्तरवार्ता चलिरहेको छ । यस्तो काममा पठाउनका लागि म्यानपावर कम्पनीले युवासँग १२ देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । यस्ता कामदारले मिनिस्ट्र अफ इन्टिरियर ह्युमन रिसोर्स डिर्पाटमेन्टमा काम पाउने भनिएको छ ।
अन्तर्वाताको लागि सुरक्षा प्रदान गर्न आएका सेक्युरिटीले भने आफुलाई यो बिषयमा केही थाहा नभएको बाटएका छन । आफुसँग को को आएका छन र कती जना आएका छन अन्तर्वाता दिन भन्ने पनि तथ्यान्क नभएको उनको दाबी छ । होप इन्टरनेशनल, अल(थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, राज ओभरसिज, अल(रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, कैलास इन्टरनेशनल म्यानपावर, न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज, डेभिड फरेन रिक्विमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज, साउन्डलिनेस रिक्रुटमेन्ट, कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिलाई मात्रै कतारमा श्रमिक पठाउने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको आरोप अन्य व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् ।
परिवारसँग दशैं मनाएपछि धेरै नेपाली युवा कामका लागि विदेशिन म्यानपावरमा चक्कर लगाईरहेका छन् । वर्षदिनको चाड सकिनासाथ नेपाली युवाको वैदेशिक यात्रा ह्वात्तै बढ्दछ । छिमेकी मुलुक भारतमा सिमा नाका पार गर्दै हजारौ सर्वसाधारण जिविकापार्जन गर्नकै लागि ताँतीका ताँती गईरहेका छन् । वैदेशिक रोजगर विभागको केही बर्षायताको तथ्यांक हेर्ने हो भने दशैंपछी मासिक ५० हजार भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगरिको लागि बाहिरिने गदर्छन् । तर, जति विदेशिने युवाको संख्याको चाप म्यानपावरहरुमा बढ्छ, ठगिने क्रम पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । विदेश जानुअघि केही आधारभूत कुरामा चुकियो भने तपाईंले भविष्यमा ठूलो दुःख पाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले आफ्नो वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सुरक्षित र सुखद बनाउन कामदार आफैं सचेत हुनुको विकल्प छैन । दलालको फन्दामा परेर ठगिने सम्भावना कम गर्न पनि यस विषयमा सचेतना र जागरण आवश्यक छ । श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गरिने कागजातहरु झुटो हुने समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु राम्रो काम र तलव सुविधा नपाएर मर्कामा परिरहेका छन् । सोहीकारण विदेशी भूमिमा पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल(सजाय र ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
त्यसैले रोजगारीमा जाने व्यक्तिले आफ्नो विदेश यात्राबारे विभिन्न कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । सोमवार र मंगलवार काठमाण्डौमा बैदेशिक रोजगार बिभागले बिभिन्न म्यानपावरहरुमा छापा मार्दा बिना श्रम स्वीकृती कामदारहरुलाई अन्तरवार्ता लिईरहेको भेटिनुलाई म्यानपावर ब्यवसायीहरुले निकै निन्दनीय घटना बताएका छन् । कामदार पठाउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा ब्यवसायीको धारणा यस्तो छ । कतारमा हुन लागेको बिश्वकप फुटवल २०२२ का लागि कामदार मागको कुरा उठेपनि अहिलेसम्म आधिकारीक रुपमा नेपाली कामदारको माग नभएकै अवस्थामा केही मेनपावरहरुको मिलेमतोमा कतारी दूतावासकै सवारी साधन प्रयोग गरी अन्तरवार्ता लिईरहेको भेटिएपछि बिभागले बिभिन्न म्यानपावरहरुमा छापा मारेको हो । यसरी कुटनीतिक मर्यादा बिपरीत कुटनीतिक नियोगको सवारीसाधन प्रयोग हुनु, श्रम स्वीकृती नआउँदै अन्तरवार्ता गर्नु लगायतका बिबिध बिषयहरुमा सम्वन्धित म्यानपावरलाई मुद्धा लाग्न सक्ने कानून ब्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले बताए । हुनत बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदार स्वयं पनि सजग र सचेत भएको खण्डमा ऊ ठगीने अवस्था कमै हुन्छ । अझ स्वदेशमै बुझेर जाने हो भने बिदेशमा दूःख पनि पाईदैन । बैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्दा निम्न कुराहरु अपनाए ठगिने सम्भाबना कम देखिन्छ ।
सिक्नै पर्छ सिप …
विदेश जाने योजना हतारमा नबनाउँदा राम्रो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपालीले विदेशमा दुःख पाएको सुनिन्छ । त्यसमा एउटा महत्वपूर्ण कारण छ, अदक्षता । तपाईंसँग विदेशमा गएर काम गर्न हातमा कुन सीप छ ? छैन भने सोच्नुस् । हातमा सीप नभएकाले विदेशमा के काम गर्लान् ? पक्का पनि त्यहाँ निकृष्ट श्रममा अल्मलिनुको विकल्प हुँदैन । म्यानपावरहरुले सीप नभए पनि कम्पनीहरुमा ‘यो काम, ऊ काम हुन्छ’ भन्लान् । तर, तपाईंसँग हातमा कुनै सीप छैन भने गाह्रो प्रकारको काम गर्नैपर्छ । आफूले जानेको काम गर्न विदेश जानुभयो भने आम्दानी पनि सोचेजस्तै हुन्छ । यो भाग्यमा हैन, सीपमा विश्वास गर्ने समय हो । त्यसैले आफैं सीप सिकेर भाग्य र भविष्य कोर्नुस् । सके देशमै काम गर्नुस्, वातावरण नमिले विदेशको लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सिकेको सीपले तपाईंलाई सधैं बलियो बनाउँछ । हतारिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । सबै कुरा राम्रोसँग बुझेर मात्र त्यसका प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
एजेन्टलाई कम विश्वास गर्नुहोस् …
तपाईं सकेसम्म कुनै व्यक्तिको भर परेर अवैधानिक रुपमा विदेश नजानुहोला । त्यस्ताको साथमा लागेर म्यानपावर कम्पनी नजानुस्, सकेसम्म आफैं म्यानपावरमा जानुस् । कुनै व्यक्तिले आफैं मिलाएर विदेश पठाउँछु भन्छ भने बिनाआधार विश्वास नगर्नुस् । कन्सल्टेन्सी र्फम, ट्राभल एजेन्सी, मनी ट्रान्सफर चेन्जर, दलाल, एजेन्ट वा अन्य कुनै पनि संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार छैन । यी कसैलाई पनि विदेश जाने आशामा रकम नदिनुस्, ठगिने सम्भावना हुन्छ । संस्थागत रुपमा कामदार विदेश पठाउने काम म्यानपावर कम्पनीले गर्छन् । तर, शहरमा सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावर पनि सरकारबाट अनुमति लिएर चलेका छन् भन्ने निश्चित छैन । तपार्इंले विदेश जान सम्पर्क गरेको म्यानपावर कम्पनीले सरकारबाट इजाजत लिएको छ कि छैन भन्ने जवाफ खोज्नुस् । म्यानपावरको काम कारवाही रोक्का भएको छ छैन ? खारेजीमा परेको छ छैन ? यी कुरा बुझ्नुपर्छ । यो जानकारी तपाईंलाई वैदेशिक रोजगार विभागले दिन्छ । किन यस्तो झन्झट गर्नु भन्ने पटक्कै नसोच्नुस्, विभागको अनलाइनमा पनि म्यानपावरको विवरण हेर्न पाइन्छ । व्यक्तिगत प्रयासबाट भिसा प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित सक्कल कागजातसहित श्रम स्वीकृति लिन सक्छ । कुन संस्था वा कोमार्फत जाने हो भन्नेबारे यथेष्ट जानकारी राख्नैपर्छ ।
काम, सुविधा र लागतमा स्पष्ट हुनुहोस् …
रोजगारीका लागि कुन देश र काममा जाने भने निर्णय तपाईंले लिने हो । त्यसका लागि लागि कति खर्च लाग्छ ? काम गरेवापत तलब, खाना र बस्ने व्यवस्था, काम गर्नुपर्ने घण्टा, ओभरटाइम भत्ता र करार अवधिबारे राम्ररी जानकारी लिनुस् । म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाउन पासपोर्ट माग गरेमा कामका लागि कति अवधिभित्र र लागतमा पठाउने भन्ने यकिन गरेर भर्पाईका साथमा मात्रै सक्कल पासपोर्ट बुझाउनुस् । आफ्नो नाममा भिसा आएर विदेश जाने निश्चित भएपछि म्यानपावर कम्पनीको बैंक खातामा वा प्रधान कार्यालयमा मात्र रकम बुझाउनुस् । बुझाएको रकमको भर्पाई अनिवार्य रुपमा लिएर सुरक्षित राख्नुहोला । कुन देश जान कति रकम लाग्छ भन्ने जानकारी तपाईंले राख्नैपर्छ । पूर्वस्वीकृतिअनुसार विज्ञापनमा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम कसैलाई नदिनुस् । देश, कम्पनी, काम गर्ने पद र पेशा, तलबभत्ता, अन्य सुविधा र सेवा सर्तबारे चित्त बुझेमा मात्र मात्र सम्झौतापत्रमा सही गर्नुपर्छ । सम्झौताको एकप्रति आफूसँग सुरक्षित राख्नुहोला । एउटै कम्पनीसँग मात्र सम्झौता गर्नुस्, दोहोरो सम्झौता गर्दा ठगिनुहोला । रकम बुझाएपछि रसिद लिन भुल्नु हुँदैन ।
आफू जाने देशबारे विस्तृतमा बुझ्नु होस् …
विदेशमा काम गर्न जान पक्का पनि सजिलो छैन । त्यसैले आफू जान लागेको देशको बारेमा राम्रो जानकारी राख्नु आवश्यक छ । त्यो देशको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, चालचलन, रीतिरिवाज र कानूनबारे साथीभाइ र अग्रजसँग जानकारी लिनुस् । त्यहाँ पुगेर फर्किएकाहरु र त्यहाँ रहेकाहरुबाट यस्ता जानकारी सजिलै पाइन्छ । आफू जाने मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासको सम्पर्क ठेगाना, अन्य कामदारलाई सघाउने र सहयोग गर्ने संघसंस्थाहरुको फोन र फ्याक्स नम्बर डायरीमा टिपेर साथैमा राख्नुपर्छ । समस्या परेका बेला त्यसले निकै सहयोग पुग्नेछ ।
श्रम, भिसा र पासपोर्टबारे जानकार हुनुहोस् ..
वैदेशिक रोजगारीमा जान व्यक्तिगत र संस्थागत गरी दुई किसिमका श्रम अनुमति जारी गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहचलस्थित कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति पाउन सकिन्छ । पहिलेको श्रम स्वीकृति म्याद नाघेको वा नयाँ देश वा कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारमा पुनः जाँदा अनिवार्य रुपले नवीकरण गराउनुपर्छ । करार अवधि सकिएपछि पनि स्वीकृतिबिना गैरकानूनी तरिकाबाट भिसाको म्यादभन्दा बढी समय नबस्नुस् । त्यसो गर्दा सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार कारवाही हुन सक्छ । आफ्नो राहदानीको म्याद समयमै नवीकरण गर्नुपर्छ । जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । श्रम स्वीकृति नलिए तपाईंलाई दलालहरुले भारतीय विमानस्थलहरुबाट उडाउन सक्छन् । त्यसैले यी विषयमा सचेत रहनुपर्छ ।
बिमा अनिवार्य गर्नुहोस्…
विदेश जानुअघि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोला । सरकारले तोकेको होलोग्राम भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र लिन नचुक्नुस् । विदेशबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएर फर्किनुपरेमा यसले क्षतिपूर्ति माग्न आधार प्रदान गर्छ । सरकारले तोकेको बीमा कम्पनीमा करार अवधिअनुसार जीवन बीमा गराउनुस् । बीमाका लागि रकम बुझाएर रसिद लिनुस् र सुरक्षित राख्नुस् । बीमाको रकम नतिरी श्रम स्वीकृति पाइँदैन । बीमा शुल्क दलाललाई नबुझाउनुहोला, बीमा कम्पनीमै गएर रकम आफैंले बुझाउनुस् ।
विदेश जानुअघि अभिमुखीकरण लिनु आवश्यक छ । यसले तपाईंलाई विदेशमा पर्ने समस्याहरुसँग जुध्न सहज गराउँछ । सरकारले तोकेको संस्थामा अनिवार्य रुपमा दुईदिने अभिमुखीकरण र जाने मुलुकको श्रम कानूनसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्छ । अभिमुखीकरण तालिमबाट आफू जाने देशको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, ट्राफिक नियम, श्रमसम्बन्धी सामान्य कानूनी प्रावधानलगायत विषयमा पर्याप्त जानकारी हुन्छ । तपाईंले कमाएको पैसा वैधानिक रुपमा नेपाल पठाउने विधिबारे पनि जानकारी लिनुपर्छ ।
कागजातको सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस् …
वैदेशिक रोजगारीमा जान विदेश प्रस्थान गर्नुअघि आफूले प्राप्त गरेका रोजगारसम्बद्ध सबै कागजातहरुको प्रतिलिपी १र१ थान आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ । आफ्नो साथमा लिएर जानुपर्ने सबै कागजातपत्र रुजु गर्नुस् । किनकि, अध्यागमनको प्रस्थान कक्षमा वा विदेश पुगेर कागज नभएर समस्या झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । कागजात तपाईंको कानूनी हतियार पनि हो । त्यसैले यसलाई परिवार र आफ्नो साथमा रहने सुनिश्चित गर्नुस् । विदेश जाँदा प्रतिबन्धित वस्तुहरु नबोक्नुहोला । विमानस्थल र विदेशमा पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ । के(के वस्तुहरु प्रतिबन्धित छन् भन्नेबारे पहिल्यै जानकारी लिनुपर्छ ।
विदेशी मार्गबाट जाँदै हुनुहुन्छ कि ?
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्न सक्रियले विभिन्न बहानामा भारतीयसहित विदेशी विमानस्थलबाट लैजाने प्रलोभन देखाउन सक्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्नुस् । अन्यथा ठगिने सम्भावना अधिक हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको निस्सा प्राप्त नहुँदै हवाई टिकट पनि खरीद नगर्नुहोला । अन्य देशको विभिन्न बाटो प्रयोग गरी रोजगारीका लागि विदेश नजानुहोला । यदि कसैले तपाईंलाई ललाई(फकाई लैजाँदै छ भने स्थानीय प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ । लुकीछिपी जाँदा ठगिने, कानूनी कारवाही हुने, अलपत्र पर्ने, दुर्घटना हुने, सम्झौताबमोजिम काम नपाउने, उद्धार पाउन कठिन हुने र कल्याणकारी कोष, बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्राप्त नहुने अवस्था आउँछ ।
पूर्वसूचनाको तयारी गर्नु होस् …
आफू ठगिए वा वैदेशिक रोजगारीबारे कुनै समस्या भएर सरकारलाई जानकारी दिन सकिन्छ । सरकारको सहयोग चाहिएको हो भने सीधै सरकारको टोल फ्री नम्बर १६६००१०९९९९ मा कल गर्न सकिन्छ । यस्तै, विभागको हटलाइन नम्बर ००९७७–१–४११२३५० मा टेलिफोन गरेर गुनासो टिपाउन र आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको टोल फ्री नम्बर १६६००१५०००५ मा पनि आफ्ना समस्या राख्न सकिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले विदेश पठाइदिन्छु भनेर रकम मागेमा तुरुन्त नजिकको स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचना दिनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीको नाम, ठेगाना परिवर्तन भएका कारण सम्पर्क गर्न नसकिए विभागमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने वैदेशिक रोजगारीका सूचनाको आधिकारिकता बुझ्नुपरेमा विभाग वा बोर्डमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसरी तपाई सुरक्षित रुपमा बैदेशिक रोजगारीमा जान सक्नुहुन्छ ।। (साभार : फोकस न्यूज, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)